Vaovao - Ny antony mahatonga ny pores lehibe
Ny pores lehibe dia azo zaraina ho sokajy 6: karazana menaka, karazana fahanterana, karazana tsy fahampian-drano, karazana keratin, karazana mamaivay, ary karazana fikarakarana tsy mety.
1. Pores lehibe karazana menaka
Matetika kokoa amin'ny tanora sy ny hoditra be menaka.Misy menaka be dia be ao amin'ny faritra T amin'ny tarehy, mihalehibe ny mason-koditra amin'ny endrika U, ary mavo sy matavy ny hoditra.
Tsara ny manadio ny hoditra isan'andro mba hifehezana ny hoditra be menaka.
2. Ny mason-koditra lehibe karazana fahanterana
Miaraka amin'ny taona, ny collagen dia very amin'ny 300-500 mg / andro manomboka amin'ny taona 25. Ny collagen dia very ny heriny ary tsy afaka manohana ny pores, ka mahatonga ny pores hivaha sy mihamitombo.Ny pores efa antitra dia mihantona amin'ny endriky ny vongan-drano, ary ny pores dia mifamatotra amin'ny fandaharana tsipika.
Atolotra ny famenoana collagen, miaraka amin'ny programa miady amin'ny fahanterana mba hanatsarana ny fikolokoloana sy ny elasticité ny hoditra.Mampiasà solomaso masoandro isan'andro.
3. Ny mason-koditra be karazana dehydration
Ny hoditra dia mazava ho azy fa maina, ny keratin eo amin'ny fanokafana ny mason-koditra dia manify, ny pores dia miharihary fa lehibe, ary ny pores dia oval.
Aroso ny hydration isan'andro.
4. mason-koditra lehibe karazana keratina
Amin'ny ankapobeny amin'ny olona manana fanadiovana tsy mety, ny endri-javatra lehibe indrindra amin'ny pores keratin dia ny metabolisma keratin tsy ara-dalàna.Ny stratum corneum dia tsy afaka mianjera ara-dalàna, ary mifangaro amin'ny sebum ao amin'ny pores mba hanakanana ny pores.
Tsara ny manadio lalina ny hoditra, mampiasa fitaovana matihanina hanesorana ny ampahany amin'ny cutin efa antitra, ary manao asa tsara amin'ny fanadiovana sy fiarovana amin'ny masoandro aorian'ny exfoliation.
5. Ny mason-koditra be karazana mamaivay
Ny ankamaroany dia mitranga amin'ny vanim-potoanan'ny fikorontanan'ny hormonina amin'ny fahazazana, ny fanerena ny akne, ary ny fahasimbana amin'ny sosona dermis, dia tena mora ny miteraka takaitra.
Tsy ilaina ny manindry ny mony amin'ny tananao mba tsy hisian'ny holatra.Mandritra izany fotoana izany, dia karakaraina amin'ny tetikasa photoelectric.
6. Ny fikarakarana tsy mety dia miteraka pores lehibe
Raha tsy mitandrina ny écran solaire isan'andro ianao, dia miteraka radika maimaim-poana be dia be eo amin'ny hoditry ny taratra ultraviolet sy ny taratra taratra be dia be ary mampitraka ny firafitry ny hoditra.Ny fikarakarana hoditra be loatra sy ny fampiasana kosmetika tsy araka ny tokony ho izy dia mety miteraka pores koa.
Izany no nanolorana azy ho manao isan`andro fiarovana ny masoandro, tsy over-hoditra fikarakarana.
Ny loharanom-pahazavana polarized parallèle dia afaka manamafy ny fisaintsainana specular ary mampihena ny fisaintsainana miparitaka;Ny hazavana cross-polarized dia afaka manasongadina ny fisaintsainana miparitaka ary manafoana ny fisaintsainana specular.Eo ambonin'ny hoditra dia miharihary kokoa ny fiantraikan'ny fisaintsainana specular noho ny menaka ety ambonin'ny tany, noho izany amin'ny maodely hazavana mitovitovy amin'ny polarized, dia mora kokoa ny mijery ny olana amin'ny hoditra nefa tsy manelingelina ny tara-pahazavana lalina kokoa.
Ny jiro polarized parallèle dia azo ampiasaina hamantarana ny olana amin'ny pores lehibemilina fanadihadiana hoditra. Meicet skin analyzerAmpiasao ny jiro polarized parallèle, ampifanaraho amin'ny algorithm mahasoa mba hanaovana famakafakana ny pores.